I-Swinging Bridge Cottage
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguLarry
Ijonge kwibhulorho ejingi yembali, kuMlambo i-Iowa, le ndlu yeendwendwe isanda kulungiswa inamagumbi okulala ama-3, iibhafu ezi-1.5, kunye nekhitshi enefenitshala evuleleke kwindawo yokuhlala. Iifestile ezinkulu zegumbi lokuhlala zijonge ngasemva kweyadi yabucala kunye nomlambo. Ifakwe kwindawo ezolileyo, indlu ifanelekile impelaveki yokuphumla, okanye indibano yosapho okanye izihlobo.
Izinto eziluncedo ziquka ishawari eneentloko ezininzi ezinobukhulu obugqithisileyo. Dish TV kunye ne-Intanethi. Iwasha kunye nesomisi ziyafumaneka ukuze iindwendwe zisebenzise. Ipaki engaphaya kwebhulorho inendlela yokuhamba kunye neenkundla zentenetya. Ngaphakathi kweebhloko zedolophu, ivenkile yekofu, ivenkile yokubhaka kunye nevenkile yokutya. Iindlela ezininzi zokuhamba kwaye ngaphakathi kweebhloko ezimbalwa zeZiko lase-Ellsworth College Fitness elinendawo yokuqubha yobungakanani beolympiki kunye nendawo yokomelela. Iidokhi zesixeko kunye nendawo yokothula. Ilungele ukuhamba ngesikhephe kunye ne-kayaking. Ukuhamba ngephenyane okukhulu kunye ne-kayaking ukusuka e-Alden ukuya e-Iowa Falls okanye kwi-Iowa Falls ukuya kwiidolophu ezisezantsi.
Ndiyavuya ukunika iindwendwe ulwazi ngeendawo ezinomdla. Ndihlala e-Iowa Falls kwaye ndiyazi kakuhle indawo engqongileyo.